कोरोना भाईरस झन् फैलाउँछु भन्छिन् यी युवती ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोना भाईरस झन् फैलाउँछु भन्छिन् यी युवती !
काठमाडौँ । अमेरिकामा कोरोना भाइरसले भयावह स्थिती उत्पन्न हुन थालेको छ। संक्रमणका कारण अमेरिकामा एकै दिन १९ सय ५२ जनाको ज्या-न गएको हो । जोन हप्कीन्स विश्व विद्यालयको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा एकै दिन १ हजार ९ सय ५२ जानको निधन भएको हो। त्यहाँ ३३ हजार भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो अमेरिकामा अहिले सम्मकै उच्च निधन दर हो।
देशमा यस्तो संकट आइरहाका बेला अमेरिकाको टेक्सास निवासी एक १८ बर्षीय युवतीले कोरोना फैलाउँछु भन्दै ध-म्की दिएपछि पक्राउ गरिएको छ । उनले स्न्याप च्याटमार्फत् बारम्बार भिडियो मार्फत् यस्तो ध-म्की दिन थालेपछि पक्राउ गरिएको कार्लटोन प्रहरीलाई उध्दृत गर्दै सिएनएन जनाएको छ ।
लोरेन मारादियागा नाम गरेकी उक्त युवतीले आफूले कोरोना परिक्षण गरेपनि रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको प्रहरी समक्ष बयान दिएकी थिईन् । उनले आ’तंक’बा’दी शैलीको ध-म्की दिएको तथा थर्ड डिग्रीको अ’पराध गरेको कसुरमा डेन्टन काउन्टीको हिरासतमा पठाइर्एको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म अमेरिकामा कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट१४ हजार ७९५ ज्यान गुमाईसकेका छन् भने चार लाख बढी संक्रमित रहेका छन् ।